» राजेश नेपालको प्रश्न : यो गणतन्त्र हो कि लुटतन्त्र ?
राजेश नेपालको प्रश्न : यो गणतन्त्र हो कि लुटतन्त्र ?
१ बैशाख २०७६, आईतवार ०९:३६
सर्वप्रथम त यो देश र जनताको लागि आफ्नो ज्यानको बलिदान दिने ती वीर सहिदहरुप्रति श्रद्घासुमन टक्राउन चाहान्छु, जसले आज हामीलाई नेपाली भनेर चिनाउनु भएको छ । अनि सम्मान उहाँको पनि गर्न चाहान्छु जो अहिलेको सरकारको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म विराजमान हुनुहुन्छ ।
मलाई कुनै कुरा चपाएर अनि लुकाएर गर्नुछैन म सचेत र स्वतन्त्र नागरिक हुँ । जसले आफ्नो भनाई स्पष्ट राख्न पाउनुपर्छ, जसलाई नेपालको संविधानले पनि सुरक्षित गरेको छ । हिजो देश टुक्राउछु भनेर हिड्ने सिके राउत आज सत्ताधारीसंग सहमती गरी राजनीतिमा सक्रिय हुन थाले । नेपाललाई विखण्डन गर्ने नारा लिएर हिडेका राउतलाई सहमतीमा ल्याएकोमा प्रधानमन्त्री मख्ख परिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री बीसौं वर्ष जेल बसेर अनि जनताले सुझाव दिँदा त सुध्रेनन् भने अब अरुबाट के आशा राख्ने र ? सधै दुध चोर्ने बिरालोले एकदिन दूध नखादैमा अब बिरालोलोले दूध चोर्दैन भनेर दूध नछोपी छोड्ने हो भने नतिजा के आउला ? पार्टी एकीकरण अगाडी माओवादी भनेको परिवर्तनबादी होइन पतनबादी भन्ने प्रधानमन्त्री ज्यु लाई आज माओवादी किन ठीक ? प्रश्न गर्न चाहान्छु । तपाईले भन्नुभयो जनताको बलिदानबाट आएको लोकतन्त्र जनताले स्वीकार गर्छन् तर जनताको बलिदानले ल्याएको गणतन्त्र यो होइन यो त तपाईंको छोराछोरी मन्त्री बनाउन, आफन्तलाई जागिर खुवाउन र जनतालाई अन्यायमा पारेर जनतालाई लुट्न ल्याएको लुटतन्त्र हो । तपाईले भन्नुभयो विश्वका विकसित देशभन्दा बढी महिला सहभागिता भएको देश नेपाल अनि खै त विकास ? एसएलसी र कक्षा आठ कक्षा पास नगरेका महिलालाई सत्तामा राख्दैमा देश विकास हुन्छ भन्ने भ्रम हटाउनुहोस जनता तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहान्छन ? तपाईंले भन्नुभयो क्षमतावान र शिक्षित महिलालाई सत्तामा ल्याएका छौ के म सोध्न सक्छु राष्ट्रपतिको योग्यता कति भनेर ? मैले यसो भनिरहँदा महिला अधिकार खोस्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन मैले त क्षमतावान महिलाको सृजना गरेर महिलालाई अगाडी बढाउनुपर्छ भन्न खोजेको हु ।
संसद भवनमा बसेर भाषण लगाएर दुई चार जनाले टेबुल ठोक्दैमा विकास भयो र हुन्छ भन्ने भ्रम हटाउनुहोस यहाँ हुम्ला,जुम्ला जाजरकोटका बिरामी सिटामोल अनि सुत्केरी महिला सुस्केरी सेवा नपाएर अकालमा मरिरहेका छन् । जनता भोकभोकै मरिरहेका छन् । तपाईंहरुलाई भारत चीन अनि अमेरिका धाउँदैमा ठीक छ । विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिदैमा, पाँच सय भत्ता बढाउँदैमा र करोडौंको हेलिकप्टर किन्दैमा बिकास भएको नसम्झनुस । के म सोध्नसक्छु आजसम्म कतिजना नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता पाए ? मैले यसो भनिरहँदा विपक्षमा बस्ने काङ्ग्रेस, राप्रपा अनि मधेसी दलहरु ताली नबजाउनुहोला तपाईहरु सत्तामा बस्दा केही गर्न नसक्ने अनि सत्ता बाहिर कान्लामुनिको भ्याकुत्तो झै उफ्रिरहने विचार गर्नुहोला । एकदिन कान्लाको ढुङ्गा पल्टिँदा लागेर मरे भन्ने सुन्न नपरोस्। तपाईं सत्ता बहिरबाट देश विकास अनि जनताको सेवा गरेर नयाँ अभियानको सुरुवात गर्नुहोस् । नेपाली जनताले तपाईलाई साथ दिने छन् । किनकी जनता अनि देश अन्याय र ठूलो संकटमा छ । खाली उखान टुक्का अनि कविता वाचन गरेर नेता हुने भए आदिकवि भानुभक्त आचार्य किन नेता भएनन् ? महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा किन नेता भएनन् ? प्रश्न गर्न चाहान्छु । तपाईले भन्नुभयो –इतिहासकै पहिलो आठ सय किमि सडक निर्माण तपाईले कहिले अनुगमन गर्नुभएको छ ? बनेको एक महिना नबित्दै सडक कच्ची भएको छ । हिउँदमा धुलाम्मे र वर्षमा हिलोको सास्ती जनताले भोगिरहेका छन् । तपाई कुन विकासको कुरा गर्नुहुन्छ यो प्रश्न सरकारलाई सोध्न चाहान्छु । तपाईले भन्नुभयो -१७ हजार नेपालीको बलिदानबाट आएको गणतन्त्र अनि खै त जनताले न्याय पाएको कहिले सोध्नुभएको छ ? ति एकल महिलालाई तिमीले न्याय पायौ भनेर कहिल्यै सोध्नुभयो ? ती बुढाबाजे अनि सेतै केस फुलेकी बुढीआमालाई तपाईको छोरो घर फर्कियो भनेर सोध्नुभयो ? कुन गणतन्त्रको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाई ? यो त जनताको जबर्जस्ती हत्या गरेर तपाईहरुको छोराछोरीलाई मन्त्री, राष्ट्रपति,आफन्तलाई करोडपति र जनतालाई रोडपती बनाउदै जनतालाई अन्यायमा पारेर जनता लुट्न ल्याइएको लुटतन्त्र रहेछ भन्न हामीलाई लागिरहेको छ । होइन भने प्रचण्ड ज्यु को छोरी किन मन्त्री ? उनका आफन्त किन सांसद अनि जनतालाई किन राणाकालीन दबाब ? के हिजो उनले जनतासामु यही भनेर युद्ध गरेका थिए ? तपाईले ल्याएको गणतन्त्र अनि प्रजातन्त्र आफैले हेर्नुस् त यहाँ जनता मर्दा वास्त नगर्ने अनि आफूलाई चाँही काँडा बिझ्दा सहन नसक्ने प्रधानमन्त्री ज्युले भन्नुभयो- विप्लव उग्रवादी र आतंककारी हो । चन्दाको नाममा जनतालाई दुख दिईरहेको छ के हिजो माओवादीले टाउकोमा गोली राखेर अनि जनता मारेर मागेको चन्दा चाँही पवित्र दान हो ? होला विप्लवको गतिविधि अलि फरक होला अन्याय विरुद्ध उठाएका कदम र काम राम्रा भए पनि तरिका फरक भए होलान् त्यसैले म सुझाव दिन चाहान्छु, हिजो कमरेड प्रचण्ड ज्युले ल्याएको गणतन्त्रमा आज जनताको अवस्था त्यसैले दीर्घकालीन योजनामा जनयुद्ध बनाउनु भएको छ भने जनताले खबरदारी गर्नेछन् ।
हेर्नुस् त न्याय र परिवर्तनका लागि बन्दुक उठाएर जनतालाई मार्नै पर्छ कस्तो मुर्ख जनतालाई मारेर जनतालाई नै न्याय दिलाउँछु भन्ने माओवादी । त्यसैले म विप्लवलाई पहिले नै सचेत गराउन चाहान्छु । तपाईलाई यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईं रुखको हाँगा काट्दा रुख मर्दैन, रुखलाई जराबाटै उखेलेर फाल्न जरुरी छ मैले भन्न खोजेको अपराधी गर्नेलाई होइन गर्न लगाउने मेन खम्बा ढाल्न जरुरी छ भन्न खोजेको हुँ । प्रधानमन्त्री ज्यु ले भन्नुभयो जनताको आदेश अनुसार चल्छ लोकतन्त्र भन्नुभयो । यदि जनताको आदेश अनुसार चलेको लोकतन्त्र भए निर्मला हत्याकाण्ड अनि ३३ केजि सुन काण्डको किन फैसला भएन ? सरकारको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका घोटालाको किन छानबिन भएन ? जनताले किन न्याय पाएनन् ? तपाईले भन्नुभयो–जनमत भन्नाले ६०१ ओटा सरकार जनमतको अभिव्यक्ति हो रे हिजो चिल्ला बोली र झुटो आश्वासन बाँडेर जनतालाई झुक्याएर सत्तामा जानुभयो अनि आज जनमतको अभिव्यक्ति भन्न लाज लाग्दैन ? कहिले सोध्नुभएको छ ती गरिवका झुपडीमा गएर – तपाईले न्याय पाउनुभयो भनेर । कहिले सोध्नुभयो ती बालिका बलात्कार गर्नेका परिवारलाई तपाईले न्याय पाउनुभयो भनेर ?
अब जनता चुप लागेर बस्ने छैनन गरीब नेपाली र जनता नेपाली युवाले विदेशमा रगत पसिना बगाएर तपाईलाई सरकारलाई तिरेको रेमिटेन्सको दुरुपयोग हुन अब नेपाली जनताले दिने छैनन् ।